Wasiirka arrimaha gudaha oo isbadel ku sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degmooyinka Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka arrimaha gudaha oo isbadel ku sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degmooyinka Muqdisho
Waxaa isbadel dhinaca maamulka ah lagu sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degmooyinka magaalada Muqdisho, kuwaas oo qaarkood lagu eedeeyay gudasho la’aan xilalkii loo magacaabay.
Wareegto kasoo baxday xafiiska wasiirka arrimaha gudaha C/raxmaan Maxamed Xuseen “Odawaa” ayaa xilka waxaa looga qaaday gudoomiyaha degmada Kaxda C/ladiif Xasan Badawi, waxaana sidoo kale isku-shaandheyn lagu sameeyay gudoomiyeyaasha degmooyinka X/weyne iyo Shingaani ee magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Kaxda ayaa isla-wareegtadaasi lagu magacaabay Maxamed Ismaaciil Macalin, halka gudoomihii degmada X/weyne Saciid C/qaadir Saciid loo badelay gudoomiyaha cusub ee degmada Shingaani.
Sidoo kale gudoomiyihii degmada Shingaani C/qaadir Maxamed C/qaadir “Carab” ayaa isna loo badalay gudoomiyaha cusub ee degmada X/weyne.
Dhinaca kale, Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Boorsaani oo codsi u gudbiyay wasiir Odawaa ayaa laga diiday, kadib markii uu ka codsaday in xilalka laga qaado gudoomiyeyaasha degmooyinka Kaaraan, Shibis iyo Dharkeenley.
Ugu dambeyntii, wareegtadaan uu wasiir Odawaa xilka uga qaaday gudoomiyihii degmada Kaxda C/ladiif Xasan Badawe, ayaa lagu sheegay wada shaqayn la’aan ka dhex jirtay gudoomiyaha xilka laga qaaday iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Boorsaani.
Si kastaba ha ahaatee, C/ladiif Xasan Badawi ayaa lagu wadaa in maalinta Khamiista ah ee fooda inagu soo haysa uu xilka si rasmi ah ugu wareejiyo gudoomiyaha cusub ee degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil Macalin.